Kulan looga hadlayo amaanka oo ka dhacay waqooyiga Gaalkacyo
Home Somali News Puntland Kulan looga hadlayo amaanka oo ka dhacay waqooyiga Gaalkacyo
Kulan looga hadlayay adkaynta amaanka magalada Gaalkacyo islamarkaasna ay wada qaateen masuuliyiinta maamulka gobolka Mudug iyo maamulka puntland iyo saraakiisha Ciidamada ayaa maanta ka dhacay waqooyiga magaalada Gaalkacyo.
Kulankan ayaa intiisa badan diirada lagu saaray sida ugu wanaagsan ee loo sugi karo amaanka magaalada Gaalkacyo, oo mudooyinkii danbe ay ka dhacayeen falal amaan daro, iyo sidoo kale qaraxyo ka dhacay magalada.
Gudoomiyaha gobolka Mudug ee maamulka Puntland Maxamed Yuusuf, oo kulanka kadib warbaahinta lahadlay ayaa tilmaamay in labada dhinac ay isla afgarteen ineey si wadajir ah uga qayb qaataan sidii loo sugi lahaa amaanka gobolka Mudug, islamarkaasna looga hortagi lahaa dad uu ku tilmaamay ineey kasoo horjeedaan amaanka Mudug.
Taliyaha qaybta Booliska ee gobolka Mudug, Jaamac Maxamed Axmed ayaa isna tilmaamay in Ciidamada amniga gaar ahaan kuwa booliska ay wadaan howlgalo lagu xaqiijinayo amanka islamarkaasna looga hortagayo dad uu sheegay ineey ka danbeeyaan falalka amni darada ah iyo qaraxyada iyo sidoo kale dilalka qorsheysan ee ka dhaca waqooyiga magaalada Gaalkacyo.
Kulankan maanta ka dhacay waqooyiga magaalada Gaalkacyo islamarkasna ay wada qaateen maamulka gobolka iyo saraakiisha amniga ayaa kusoo beegmaya xilimudooyinkii danbe ay socdeen kulamo gooni gooni ah oolooga arinsanayo amaanka magaalada Gaalkacyo.